အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၅၀၅(က)နဲ့ ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေများထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ လိမ်လည်ခံခဲ့ရ – Wun Yan
အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၅၀၅(က)နဲ့ ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေများထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ လိမ်လည်ခံခဲ့ရ
အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၅၀၅(က)နဲ့ ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေများထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ နောက်ကျောဓားထိုး လိမ်လည်ခံခဲ့ရ
ဒီနေ့ ဒီအကြောင်းအရာလေးကို Instagram ဖွင့်ကြည့်ရင်း တွေ့လိုက်ရချိန်မှာ Admin team အနေနဲ့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်…
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ၄ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ ဖြူဖြူ့ရဲ့ မိသားစုလေးမှာ အမဖြစ်သူက အိမ်ထောင်ကျပြီး နိုင်ငံခြားမှာပဲ နေထိုင်နေတာမို့ လက်ရှိမှာ ဖြူဖြူနဲ့ ပင်စင်စား မကျန်းမာတဲ့ မိဘအိုတွေပဲ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်….
ဒါကြောင့်မို့ပဲ ခင်ရာဆွေမျိုးဆိုသလို နီးစပ်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ကူညီဖေးမမှုနဲ့ ရပ်တည်နေလာခဲ့ပြီး ဖြူဖြူ့ကို ၅၀၅ စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခံရချိန်မှာတော့ မိဘတွေကို သင့်တော်ရာမှာ ရွေ့ပြောင်းပြီး လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု တချို့ကို ယုံကြည်ရတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ မိတ်ရင်းဆွေရင်းတွေထံမှာ ခေတ္တ အပ်နှံပြီး ရှောင်တိမ်းနေခဲ့ရပါတယ်…
အဲ့ဒီနောက် အချိန်တစ်ခုကြာပြီးနောက် လိုအပ်ရာတွေမှာ သုံးစွဲဖို့ အပ်နှံထားသူတွေထံမှာ ပြန်လည်တောင်းယူတဲ့အချိန်မှာတော့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံရပြီး နောက်,ကြာတော့မှ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ နောက်ကျောဓားထိုး လိမ်လည်ခံရမှန်းသိလိုက်ရတာပါ….
တကယ်ဆိုရင် ခုချိန် တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကစလို့ အစစအရာရာ ယိုယွင်းနေချိန်မှာ… နိုင်ငံအရေးအခင်းအပေါ် ပရိသတ်နဲ့ တသားထဲ ရှိနေပေးခဲ့လို့ ၅၀၅ စာရင်းထည့်ခံရပြီး မိဘအိုတွေနဲ့ ခွဲပြီး အနေအစားဆင်းရဲစွာ ရှောင်တိမ်းနေရတဲ့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်ကို ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ပေးရမယ့်အစား ရေနစ်သူဝါးကူထိုးသလို ဒုက္ခပေးကြတဲ့ အဖြစ်ကို ဖြူဖြူ့ပရိသတ်များ သိရှိစေဖို့ရာ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ဖြူဖြူ နဲ့ မိသားစုအတွက် ဆုတောင်းခြင်းများဖြင့် ဝန်းရံပေးကြပါဦးနော် 🙏🙏🙏
Source – https://www.instagram.com/p/CTBTZZzs1l8/?utm_medium=copy_link
Credit : Lyrics Video of Phyu Phyu Kyaw Thein
မီးတွင်းထဲမှာ မိခင် ဆုံးသွားတာကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ကလေး သုံးယောက်ကို မွေးစားမယ့် ခိုင်နှင်းဝေ
ရေကြီးနေတဲ့ ဒေသက ဒုက္ခသည် ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ကယ်လှေတွေ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
← မိမိငွေ အဝင်များဖို့ အထွက်နည်းဖို့ လာဘ်ကောင်းဖို့ လုံခြုံစိတ်ချဖို့ ကံတက်စေဖို့အတွက် နည်းလမ်း
ခြေဖဝါး ဆားနင်းခြင်းရဲ့ ကျန်းမားရေး အကျိုးကျေးဇူးများ →